Uma usika futhi udayize izinwele zakho ngoJanuwari 2018 emkhakheni wekhalenda yenyanga: usuku oluhle
Izigaba zenyanga ziba namandla kakhulu esimweni nasempilo yomuntu. Futhi ekuphileni kwansuku zonke, amantombazane amaningi angabona ukuthi usuku lwenyanga nosuku lwenyanga lungathuthukisa noma bubi kakhulu isimo sezipikili, izinwele. Yingakho sincoma ukuba ufunde ngokucophelela amatafula ethu ngaphambi kokugqoka izinwele nokugqoka. Zihlanganisa ikhalenda ye-oracle nekhalenda ye-January 2018. Amathiphu alula nezincazelo azokusiza ngesikhathi sokwenza umbala noma izinwele. Amakhalenda aLunar ematafuleni aqukethe imiyalelo eqondile ngezinsuku ezihle futhi ezingenakuhle zalezi zinqubo.
Izinwele zezinwele zekhalenda lunar kanye nezinwele zezinwele zikaJanuwari 2018 - izinsuku ezihle etafuleni
Izinsuku ezikhethiwe kahle zokushintsha isithombe ziyisiqinisekiso sokukhula kwezinwele eziphilile. Futhi ngisho nokugcoba ngezinsuku ezinjalo ngeke kube yingozi futhi ngeke kube kubi nakakhulu ukubonakala kwezingqimba. Kuzosiza ukukhetha usuku oluhle lwezinwele zokusika nezinwele ngoJanuwari 2018, ikhalenda yethu yenyanga ematafuleni.
Izinsuku ezithandekayo etafuleni
Kumantombazane anamuhla, sidale ikhalenda elula futhi eqondakalayo yenyanga ngesimo samatafula. Usuku ngalunye oluhle luboniswa izinwele zezinwele nezinwele. Ukusebenzisa ithebula lekhalenda elilula ukukhetha isikhathi esihle sokushintsha isithombe akunzima.
Uma usika futhi udayise izinwele zakho ngoJanuwari 2018 nge-oracle - itafula eningiliziwe nezincazelo
Lapho ukhetha usuku oluhle lokubuyekeza ikhanda lezinwele, abesifazane abaningi baqondiswa yi-oracle. Kuye, ungathola kalula usuku olufanele lokuvakashela izinwele zakho ezizintandokazi noma ubuhle be-salon. Etafuleni elilandelayo ngezincazelo, ungathola ukuthi, ngokusho kwe-oracle, kungcono ukusika nokudayisa izinwele zakho ngoJanuwari 2018.
Kungcono nini ukusika izinwele izinwele ngokusho kwe-oracle ngoJanuwari 2018?
Ithebula lethu elilula-i-hint lizosiza wonke ama-fashionista athole usuku oluhle lokushintsha izinwele noma izinwele ezidayayo. Izincazelo eziningiliziwe kuzoba usizo olungcono kakhulu lokurekhoda ku-salon. Bazokutshela ukuthi ukusika izinwele, futhi uma umbala wezintambo kufanele wenziwe ngoJanuwari 2018.
Lapho ukusika izipikili ngoJanuwari 2018 ngokusho kwe-oracle kanye nekhalenda yenyanga - isibonakaliso sezinsuku ezihle
Akukhona nje ukusika izinwele, kodwa nokusika kwe-nail kufanele kwenziwe ngesikhathi. Usuku olulungile lokukhipha imithi luzoqinisa ukuqiniswa kanye nempilo ye-plateyili ye-nail. Ngakho-ke, sakha itafula elula futhi eqondakalayo, ekhombisa ukuthi ukusika izipikili ngoJanuwari 2018 ngokusho kwe-oracle kanye nekhalenda yenyanga.
Ngakiziphi izinsuku, ngokusho kwe-oracle nekhalendara yenyanga kaJanuwari, kungcono ukusika izipikili ngo-2018?
Idatha ye-oracle nekhalenda yenyanga ihambisana nezici eziningi. Ukufaniswa kwabo kukuvumela ukuthi unqume ngokunembile ngangokunokwenzeka lapho usika izipikili zakho. Ngakho-ke, etafuleni lethu, usuku ngalunye luboniswa izinwele zokukhishwa kwekhalenda yenyanga kanye ne-oracle. Ithiphu elinjalo lisiza ukwenza i-manicure noma i-build-up ewusizo. Ukwenza kube lula ukukhetha okufanele ukusika nokugcoba izipikili, sincoma ukuthi ulondoloze ithebula lethu.
Ngemva kokufunda ngokucophelela idatha yekhalenda yenyanga kanye ne-oracle, saqoqa amatafula eningiliziwe wezinwele zokukhwabanisa nokukhwabanisa. Bayosiza ukuhleleka ngcono impilo yabo futhi bakhethe izinsuku ezihle ukuvakashela salon. Amakhalenda eningiliziwe anezincazelo zosuku ngalunye lukaJanuwari 2018. Izeluleko ezinjalo zizosiza ukukhohlwa mayelana ne-fragility ye-plate ye-nail, unike ukuvala ukukhazimula nokukhanya. Ngenxa yalokhu, abesifazane kudingeka bafunde ngokucophelela ikhalenda yenyanga yezinwele zezinwele zikaJanuwari 2018 bese ukhetha isikhathi esihle sokuvuselela isithombe sabo.
Lokho abantu abakucabangayo nge-cellulite: Imibono yezinkanyezi namadoda avamile
Ngikhipha ukugembula ngeke uqagele ukuthi le nto isetshenziselwe yini?
Uma umuntu engenzi isipho ngemuva konyaka wobudlelwane: Amathiphu wokuhlanganisa
I-Gazpacho kusuka kumvungu
Ukuzivocavoca kwesisu esingaphansi
Usizi: umuzwa ohlakaniphe kakhulu
I-Horoscope ngo-September 2016 ye-Sagittarius
Izibhamu namantongomane nezithelo zomisiwe
Izindebe zansuku zonke zezinwele ezinde
Ukuthuthukiswa kwodonga lwesisu emantwaneni
"I-Jet Fresh" ebuhlotsheni bobulili
Ingabe izinqubo ze-nitrogen zamanzi ziyasiza?
Thola ukuphela: iseluleko esivela kuBarbara Cher
Kanjani ngokushesha ukususa izimpawu zokuqala zomkhuhlane ngamakhambi abantu?